मतगणना अपडेट: कांग्रेस र एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा | KTM Khabar
मतगणना अपडेट: कांग्रेस र एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा
२०७४ जेष्ठ ३ गते १४:२४ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ३ जेठ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना आज पनि जारी छ । चारदिन देखि जारी मतगणनाको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ ।
पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच कडा प्रतिसप्रर्धा देखिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख पदमा एमालेले अग्रता लिएको छ कांग्रेस पनि नजिकनजिक छ ।नेकपा माओवादी केन्द्रे तेस्रो स्थानमा छ ।
अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेस ३३ र नेकपा एमालेले ३६ स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा विजय हासिल गरेका छन् । उनीहरुलाई पछ्याउदै नेकपा माओवादी केन्द्रले २० स्थानमा जित हासिल गरेको छ । ३ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
त्यसैगरी उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेस १९, एमाले ४२, माओवादी केन्द्र १८, स्वतन्त्र ३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २ स्थानमा विजयी भएका छन् ।
त्यस्तै वडा अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेस ८२, एमाले ८६, माओवादी केन्द्र ७८, स्वतन्त्र २, राप्रपा ३, नयाँ शक्ति ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा २, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १ स्थानमा विजयी भएका छन् ।
त्यस्तै वडा सदस्य महिलातर्फ काँग्रेस ९, एमाले ९, माओवादी केन्द्र ३, राप्रपा २, नयाँ शक्ति २, र नेमकिपा १ स्थानमा विजयी भएका छन् ।
यस्तै, वडा सदस्य दलित महिला तर्फ काँग्रेस ८, एमाले ८, माओवादी केन्द्र २, राप्रपा २, नयाँ शक्ति २ स्थानमा विजयी भएका छन् ।
यसैगरी वडा सदस्य खुला तर्फ काँग्रेस २०, एमाले १८, माओवादी केन्द्र ६, राप्रपा ३, नयाँ शक्ति ३, नेमकिपा १ स्थानमा विजयी भएका हुन् ।
प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार नगरपालिकाको मेयर पदमा एमालेले ४, कांग्रेसले १ र माओवादी केन्द्रले १ स्थानमा विजयी भएका छन् ।
एमालेका तर्फबाट, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा गणेशबहादुर शाही, दैलेखको नारायण नगरपालिकामा रत्नबहादुर खड्का, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा सीपी घर्ती, डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकामा ओमबहादुर बुढा, दोलखाको जिरी नगरपालिकामा टंक जिरेल विजयी भएका छन् ।
त्यसैगरि कांग्रेसको तर्फबाट लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकामा रमेशराज पाण्डे र माओवादी केन्द्रबाट रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकामा देवीलाल गौतम मेयर पदमा विजयी भएका छन् ।
गुन्डा नाइके गणेश लामालाई इन्काउन्टरको प्रयास
काठमाडौं । गुन्डा नाइके गणेश लामालाई पिंगलास्थानमा भएको ‘फाइट’मा इन्काउन्टर गर्न खोजिएको तथ्य फेला परेको छ । तर ...
विमान दुर्घटना अपडेटः जलेको अवस्थामा दुई जनालाई नर्भिक अस्पताल ल्याइयो
काठमाडौ । त्रिभुवन विमानस्थलमा सोमबार साँझ भएको युएस बंगला एयरको विमान दुर्घटनामा उद्दार गरिएका दुई जना यात्रुलाई नर्भिक अन् ...
टुँडिखेलमा डेढ लाखले एकसाथ बुद्धबचन बाचन गरे, बन्ला त विश्व रेकर्ड ?
काठमाडौं । विश्व कीर्तिमान बनाउने प्रयासमा आज हजारौं मानिस टुँडिखेलमा भेला भएर एकसाथ भगवान गौतम बुद्धको वचन ‘धम्मपद&rsq ...
यि तस्विरहरु जसले विश्वभरी नै चर्चा पाए
काठमाडौँ । वाइल्डलाईफ अर्थात वन्य जीवन झल्काउने यी तस्बिरहरुले धेरैको मन जितेको छ । वाइल्डलाइफ फोटोग्राफरका क्यामेराले कैद गर ...
मन्टेश्वरी प्रविधिमा आधारित शिक्षा आजको आवश्यकता
(१) पृष्ठभूमी मन्टेश्वरी प्रविधिको कुरा गर्दा हामीले सर्वप्रथम इटालियन दर्शनशास्त्री डा. मारिया मन ...
नार्इ भन्ने ताकत
डा. योगी विकाशानन्द उनले कहिल्यै लेख्न, पढ्न चाहेनन् । बुबा र काकाले यहि निउमा उनलाई बेला–बखत भक्कुमार कुट्थे । उनले ठाडै भ ...